Global Voices teny Malagasy » Ghana: Lohahevitra Tao Amin’ny Tontolon’ny Twitter Ghaneana Ny Fahafatesan’ny Filoha- · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Jolay 2012 12:56 GMT 1	 · Mpanoratra L. Abena Annan Nandika avylavitra
Ny 24 Jolay 2012 dia niaina zavatra nampalahelo i Ghana, sambany teo amin'ny tantarany: Ny filoha amperin'asa  no nodimandry. Ary dia taonan'ny fifidianana ihany koa. Raha ny rivotra niainana tao amin'ny Parlemanta, nalain'ny Ghana Television  (GTV) an-tsary dia fahatairana sy alahelo satria endrika natofezaky ny alahelo lalim-paka no hita tamin'ireo Mpikambana ao amin'ny Parlemanta. Tamin'ny 8 ora alina ny Filoha Lefitra John Dramani Mahama  no nanao fianianana  ho Filohan'ny Repoblikan'i Ghana.
John Atta Mills no Filoha Ghaneana voalohany maty amperin'asa. Sary natolotry ny antoko National Democratic Congress aof Ghana.
Nefa ora efatra talohan'io, izany hoe taorian'ny nilatsahan'ny vaovao, mbola nampiasa ny Twitter hamoahany ny hatairany sy ny alahelony ireo Ghaneana. Nikapoka tao amin'ity tranonkalanà media sosialy ity ny vaovao momba ny nahafatesan'ny Filoha talohan'ny nanamafisan'ireo tranom-pampahalalam-baovao azy ho ofisialy.
Myjoyonline.com dia nanitsy ny tatitra fohy avy aminy  navoaka avy hatrany taorian'ilay fanambaram-pahafatesana narahana antsipirihany bebe kokoa ary miaraka aminà sary iray mampiseho ny fahalasanan'ny filoha ora maro taty aoriana:
Nodimandry ny Filoha John Evans Atta Mills. Tany amin'ny Toeram-pitsaboana Miaramila “37 Military Hospital” izy no maty ny Talata tolakandro. Taratasy iray fanambaràna voasonian'i Henry John Martey Newman , lehiben'ny etamajaoro no nanamafy ny fahafatesany.
Nampanao fianianana ny Filoha Lefitra John Dramani Mahama ny Parlemanta, ho filoha mpisolo, mifanaraka amin'ny andininy faha-62 ao amin'ny Lalam-panorenana tamin'ny 1992.
Ny Filoha vaovaon'ny Ghaneana, Sary avy amin'ny Helen Clark/UNDP.
Nanome rohy ihany koa izy io mankany amin'ny fanambaràna ofisialy  avy amin'ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao manamafy ilay fahafatesana.
Saingy tao amin'ny Twitter, ny fahafatesan'ny filoha no lohahevitra noresahana be indrindra saiky ho an'ny ankamaran'ny Ghaneana.
@MsAbenaAnnan : Andro manjombona ho an'i #Ghana – Nodimandry ny filohantsika John Evans Atta Mills #johnevansattamills
@nii_ayertey:  #Ghana Nodimandry ny filohantsika John Evans Atta Mills. Ilay lehilahy efa maty im-betsaka talohan'ny tena fodiamandriny. Handry am-piadanana anie ny fanahiny. #fb
Arakaraky ny fivoaran'ny vaovao, betsaka ireo fanehoan-kevitra sy vaovao nanomboka niraraka :
@MsAbenaAnnan : Tsy manome tolotra lafatra ny tambajotram-pinday ankehitriny hatramin'ny nanambaràna ny fahafatesan'ny filoha n'i Ghana – midoboka foana ny antso. #deathofpresidentmills
@MsAbenaAnnan : vaovao VAO NILATSAKA avy amin'ny loharano anatiny: tsy nahatsiaro tena ny FilohaMills #PresidentMills ary nentina haingana any amin'ny 37 Military Hospital androany. Nodimandry talohan'ny nahatongavany tany izy. #ghana
@VickieRemoe:  Nambaran'ny Radio journo fa mitangorona ao amin'ny foibe Kwame Nkrumah ireo mponina ao Accra. Ny sasany tamin'ireo tsenam-behivavy dia nampiato ny asa fivarotany #MANDRIAAMPIADANANA #RIPMills #Ghana
@feathersproject : Mazava be ankehitriny hoe maninona no i Ghana no notsidihan'i Obama fa tsy Nizeria…
@yaw_p : Afaka hahatsapa fanantenana vaovao amin'ilay filoha vaovao aho
Ny ampitson'ilay fianianana nataon'i John Mahama ho filoha vaovaon'i Ghana, vao mainka tondraky ny bitsika ny tao amin'ny Twitter:
@Africatechie:  Manana fahaizana tsara ny tontolon'ny TIC ny filoha vaovaon'i Ghana http://bit.ly/NJ7QYt  avy amin'ny @oafrica
@adwoagyimah : Mifohaza ho an'ny tanindrazanao ry tanoran'i Ghana. Mitaky ny fandavan-tenanao ny firenena…..
Mazava be fa ny fiovàna ara-politika tsy misy gidragidra dia nitondra tsirim-panantenana hisian'ny demaokrasia ao am-pon'ny Ghaneana.
@ Africatechie:  nouveau président du Ghana a une expérience approfondie des TIC http://bit.ly/NJ7QYt  via @ oafrica
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/25/36095/
 Ny filoha amperin'asa: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Atta_Mills
 Ghana Television: http://en.wikipedia.org/wiki/GTV
 nanao fianianana: http://edition.myjoyonline.com/pages/news/201207/90956.php
 dia nanitsy ny tatitra fohy avy aminy: http://edition.myjoyonline.com/pages/news/201207/90941.php
 fanambaràna ofisialy: http://media.myjoyonline.com/docs/201207/President%20John%20Mills%20is%20dead.JPG